Germalka iyo Faransiiska oo ku baaqay in Midowga Yurub uu jawaab ka bixiyo Daandaansiga Turkiga Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaGermalka iyo Faransiiska oo ku baaqay in Midowga Yurub uu jawaab ka bixiyo Daandaansiga Turkiga
Germalka iyo Faransiiska oo ku baaqay in Midowga Yurub uu jawaab ka bixiyo Daandaansiga Turkiga
October 16, 2020 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Wasiirrada arrimaha dibedda ee Jarmalka iyo Faransiiska ayaa ku eedeeyay Turkiga inuu ka careysiinayo Midowga Yurub madama sii wadaan sahaminta gaaska dabiiciga ee biyaha ay kula loolamayaan waddamada xubnaha ka ah EU ee Giriiga iyo Qubrus.
Ankara waxay ka saartay markab sahamin gaas , Oruc Reis, biyaha bariga Mediterranean ka hor shirkii EU-da bishii Oktoobar 2, inta lagu guda jiray shirkaasi oo hoggaamiyeyaasha Midowga Yurub ay ku hanjabeen inay cunaqabateyn saari doonaan haddii Turkiga uusan joojin sahaminta gaaska.
Si kastaba ha noqotee, toddobaadkan Turkiga ayaa dib u celiyay markabkiisa wuxuuna sheegay inuu bilaabayo hawl 10 maalmood qaadaneysa oo sahamin ah koonfurta jasiiradda Giriigga ee Kastellorizo.
Khamiistii, Wasiirka Arrimaha Dibadda Jarmalka Heiko Maas wuxuu sheegay in “daandaansiga” Turkiga uu ka dhigay geedi socodka la isku afgartay ee wadahadalka dacwadaha badda ee Turkiga, Griiga iyo Qubrus mid aan macquul aheyn.
“Tani waa wax ka caroodaan xataa anaga oo aan wadnay doorkeenna dhexdhexaadinta,” ayuu yiri Maas, isaga oo intaa ku daray in khilaafka lagu xallin karo oo keliya wadahadal toos ah, iyo in jawaabta Midowga Yurub ay u baahan tahay in lagu saleeyo in wadahadallada ay socdaan iyo in kale.
“Haddii aysan jirin [horumar], markaa Midowga Yurub waa inuu wajaho su’aasha ah sida wax looga qabanayo taasi oo cawaaqib ka ka dhalan karto,” ayuu Maas ka sheegay caasimada Paris.
Dhiggiisa Faransiiska, Wasiirka Arrimaha Dibadda Jean-Yves Le Drian, ayaa sheegay in ay u taal Ankara in ay tallaabada qaaddo isla markaana Midowga Yurub uu diyaar u yahay in uu beddelo dheelitirka awooddiisa haddii Turkigu uusan ku laaban wadahadalka
“Waxaa noo cadaatay in Turkiga uu si joogto ah u wado falal daandaansi ah oo aan la aqbali karin,” ayuu yiri Le Drian.
Wadahadalladii 2-dii Oktoobar ka dib, Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu dib u eegi doono suurtagalnimada cunaqabateynta la saaro Turkiga shir madaxeed kale oo dhici doona bisha Diseembar.
Arbacadii, Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu ku eedeeyay Giriigga iyo Qubrus inay fulin waayeen “ballamihii” laga qaaday intii lagu jiray wadahadalada Midowga Yurub.
“Waan sii wadi doonaa inaan siino jawaabta ay mudan yihiin Griiga iyo maamulka Griiga ee Qubrus oo aan fulinin balanqaadyadoodi intii ay socdeen wadahadalada,” ayuu yiri Erdogan, isagoon cadeynin waxa ay ahaayeen “balanqaadyada”.
Dowladda Giriigga ayaa sheegtay in aysan macquul ahayn in laga wada hadlo dacwadaha la xiriira badda halkasi mid ka mid ah ka socdaan howlo sahmin ah.
Horaantii todobaadkan, Ankara waxay sheegtay in Oruc Reis dib loo celiyay kadib “ficillo daandaansi ah” oo Giriiggu sameeyay, oo ay ka mid tahay qabashada dhoolatusyo milatari oo ay ka sameeyeen Badda Aegean oo lagu soo beegay maalinta ugu weyn ee fasaxa qaran ee Turkiga.
Xigasho rs (AP, dpa, Reuters, AFP)